ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင် | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ကွန်တိန်နာများတွင်ဆောက်လုပ်ရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစွန့်ပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ သို့ဖြစ်လျှင်အဘယ်ကြောင့်အနီးအနားရှိအမှိုက်ပုံများမှအထူးအလောင်းများရှိသနည်း။ ဆောက်လုပ်ရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက်မဟုတ်ပါ၊ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုသီးခြားစွန့်ပစ်သည်။
ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက် (နောက်ခံပုံများ၊ အုပ်ကြွပ်များ၊ ပြားများ၊ ... ) ပြီးသည့်အကြွင်းအကျန်များနှင့်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက် (နောက်ခံပုံများ၊ အုပ်ကြွပ်များ၊ ပြားများ၊ ... ) ပြီးသောအချောများ၏အကြွင်းအကျန်များကိုဘာလုပ်ရမည်နည်း။ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှအသုံးမပြုသော်လည်းအပြီးသတ်အလှဆင်ခြင်းပျက်စီးမှုတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်တွင်ကြွေပြားများကျန်ခဲ့သည်။
3D မှာအိမ်တစ်လုံးကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲ။ ဒါကိုအထူးကုတစ်ယောက်ကလုပ်သင့်တယ်။ ၂။ သင်ကိုယ်တိုင်အရာအားလုံးကိုလုပ်လိုပါကအချက် ၁ ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင့်သွားများကိုသင်ကိုယ်တိုင်လည်းကုသနိုင်သည်။ သို့သော်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်လူတိုင်းပြေးကြသည်။
ဘိလပ်မြေ၏ Analogues ဘာတွေလဲ? အစားထိုး?
ဘိလပ်မြေ၏ analog များဘာတွေလဲ? အစားထိုး? ဘိလပ်မြေအစားထိုးများ - ယေဘူယျအားဖြင့် gypsum (alabaster)၊ magnesia ဘိလပ်မြေ၊ ရေဖန်ခွက်၊ ဤအရာဝတ္ထုများကိုဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ အထူးဆောက်လုပ်ရေးအရောအနှောများ (putties, plasters), drywall, ...
အဆောက်အ ဦး အသစ်၏အရည်အသွေးကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အကယ်လို့သင်ဟာကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်မဟုတ်ရင်၊ သူတို့ကိုလျှို့ဝှက်ထားလို့မရပါဘူး။ သူတို့ဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့တဖြည်းဖြည်းထွက်လာလိမ့်မယ်၊
ယူရိုပြတင်းပေါက်မှန်ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။ ယူရိုပြတင်းပေါက်များသည်သစ်သား၊ အလူမီနီယမ်နှင့်ပလပ်စတစ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အများစုမှာပြတင်းပေါက်များဖြစ်သည်။ လူသိများသောကုမ္ပဏီများမှပြုလုပ်သောပလတ်စတစ်ပရိုဖိုင်းကိုသာရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်များများစားစားမဟုတ်ချေ။ ဤသည်မှာကိုရီးယား LG Chem ပရိုဖိုင်ဖြစ်သည်။
အတ္တလန္တိတ်ဘွိုင်လာမှရေကိုဘယ်လိုထုတ်ရမလဲ။ ရေအေးစက်မှရေကိုညှစ်ရမည်။ ဘွိုင်လာရှေ့မှာရေအေးကိုပိတ်လိုက်တယ် ကျနော်တို့ရောနှောအပေါ်ပူထိပုတ်ပါဖွင့်လှစ်, ရေစစ်ထုတ်သောအခါ, ငါတို့သည်အသာပုတ်ပိတ်။ ငါတို့အဆို့ရှင်ကိုရှင်းလိုက်တယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်သင့်ကွန်ပျူတာကို fix ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကွန်ပျူတာကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။ အသိပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး နှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးပရိယာယ်များကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့လာခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသင်တစ် ဦး ချင်းလုပ်ကွက်များကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်သင်ဗဟုသုတရှိပါက (သို့မဟုတ် ...
ဒါကြောင့်အဟောင်းအခင်းကျော်ဖျင် lay မှဖြစ်နိုင်ပါသလော
သစ်သားကြမ်းခင်းကိုကြွေခင်းခင်းခင်းနိုင်ပါသလား။ dampness သို့မဟုတ်မှိုမရှိပါကအဟောင်း၏ထိပ်တွင်ထားနိုင်သည်။ Laminate ကိုအလွယ်တကူခင်းနိုင်သည်၊ သို့သော်ပါကေးခင်းထားခြင်းကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားလျှင်အမြင့်ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။
အဘယ်အရာကိုပိုကောင်း konfirmat သို့မဟုတ်ဝက်အူ?
အဘယ်အရာသည်ပိုကောင်းသနည်း။ မင်္ဂလာပါချစ်လှစွာသောမေးခွန်းစာရေးသူ။ သင်တင်လိုက်သည့်ဓါတ်ပုံများတွင် screw နှစ်ခုသာရှိသည်ကိုစတင်ကြပါစို့။ အဲဒီမှာအတည်ပြုချက်မရှိ။ အတည်ပြုချက်သည်ဤပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည် အခုပြန်သွားပါ
မျက်စိကန်းသောဝင်းဒိုးကဘာလဲ? ၀ င်းဒိုးသည်စွန်းထင်းသောပြတင်းပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နံရံတွင်အခန်း၏အလင်းနှင့်လေဝင်လေထွက်အတွက်တံခါးပေါက်ဖွင့်သည်။ မျက်စိကန်းသော ၀ င်းဒိုးသည်နံရံရှိနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာ brazing ဂဟေဆော်ရာမှကွဲပြားခြားနားသောပါသလဲ
ဂဟေနှင့်သတ္တုအကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ ဂဟေဆော်ခြင်းသည်သတ္တု၏အရည်ပျော်သောအပူချိန်နှင့်အဆစ်ကိုအပူပေးခြင်းဖြင့်အစိတ်အပိုင်းများ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ဂဟေဆော်သောintoရိယာသို့ဖြည့်ပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်အပူပေးသည်။
အဘယ်အရာကို2နှစ်ပေါင်းတတန်းအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတူးဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
ဝယ်ယူပြီးနောက်ရေမီတာ၏ကန ဦး ဖတ်ဘာတွေလဲ? ဒါကိုစိတ်မပူပါနဲ့ တံဆိပ်ကိုတပ်ဆင်မည့်သခင်ကသက်သေခံချက်ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမည်။ ထို့အပြင်၊ သင်၌အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးရှိနိုင်သည်။
လက်သမားသည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၌ကျွန်တစ် ဦး နှင့်တူသလော။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၌အသုံးများသောသူသည်ကျွန်ကဲ့သို့ဖြစ်သလော။ ကျွန်နှင့်အလုပ်သမားသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအတန်းများဖြစ်သည်။ ကျွန်သည်လစာမရ၊ သူသည်ကျွေးမွေးသောအချက်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ အလုပ်သမားသည်လစာရရှိသည် ...
အိမ်တွင်အနုပညာရှင်တစ် ဦး အတွက်အလုပ်ခွင်မည်သို့စီစဉ်ရမည်နည်း။ ပြီးတော့မင်းဘာလုပ်လဲ ရေနံလျှင် .. ထို့နောက် sketchbook ဝယ်ကြလော့။ သင်လိုအပ်သမျှသည်၎င်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အလုပ်ကသိပ်ကြီးလွန်းရင် sketchbook ကိုသုံးနိုင်တယ်။
အနက်ရောင်သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင် - အဘယ့်ကြောင့်နည်း။
အနက်ရောင်သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင် - အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ ကတ္တရာကျောက်ဆောင်သို့မဟုတ်ကျောက်စရစ်များ၊ သဲများနှင့်ကတ္တရာစေးများပါဝင်သည်။ ကတ္တရာစေးသည်များသောအားဖြင့်အနက်ရောင် (သို့) အညိုရောင်မှောင်မိုက်သောကြောင့်သီအိုရီအရကတ္တရာသည်အနက်ရောင်ဖြစ်သင့်သည်။
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,864 စက္ကန့်ကျော် Generate ။